Packaging - Delta Engineering Belzika
Ny Delta Engineering dia manolotra milina fanaovana packing feno.
Jereo koa ange mpitari-dalana milina fonosana hahitana ny vahaolana tadiavinao.
Ny kitapo dia ny ho avin'ny fanamboarana tavoahangy. Ny vidin'ny kitapo dia ny 20% amin'ny vidin'ny fonosana baoritra sy mampihena ny asa an-tsokosoko. Etsy andanin'izany, ny kitapo dia fomba fahadiovana be dia be: tsy misy fifandraisana mifandray amin'ny vokatra vita intsony ary tsy misy atahorana ho an'ny areti-mandoza amin'ny baoritra.
Ny milina fitaterana rehetra dia, ao anatin'ny faritra misy azy ireo, afaka mamokatra ny halavany sy ny halavany ary ny sakany mba hahombiazan'ny fametrahana pallet. Natao ihany koa izy ireo hikarakarana tavoahangy sarotra sy hanaovana fanovana famokarana haingana.
Hamaky bebe kokoa …
Manaraka eo am-baravaranao dia azonao atao ny mampiasa ny mavokavokay mihidy mba hanomezana fitoniana bebe kokoa amin'ny kitapo.
Ny fonosana fitoeran-damba dia mijanona ho fomba mahazatra indrindra amin'ny famonosana tavoahangy amin'ny fitoeran-damba. Ny Delta Engineering dia manolotra fonosana feno fitoeran-damba feno, mora mandroso ary miovaova. Manome safidy malalaka betsaka ihany koa izahay amin'ny fikarakarana ireo tavoahangy sarotra indrindra. Ny fonosana lalamby rehetra dia afaka misy fitaovana fitehirizana toerana sy testeran'ny bocazy ara-toekarena.
Misy palletizer iray feno azo alaina, manomboka amin'ny semi-automatique mankany amin'ny unit automatique feno. To palletize fitoeran-javatra azo itehirizana na manangona tavoahangy feno anaty fitoeran-damba, eo ambony satroka (tray misy sisiny miampita), amin'ny takelaka fisaka, amin'ny antsasaky ny fitoaly. Ny unit automatique feno dia afaka manao paletety amin'ny haavony 3.1m.
Fantaro ireo singa miorina amina stacking & destacking miovaova izay azo ampiasaina hametrahana ireo trays, kitapo, sosona ary fonony ambony.
Ny tarika samihafa dia misy amin'ny fampidirana mba hahazoana ireo fonosana feno fonosana feno.
Hizara fampitana 1 tonga hatramin'ny mpandray hafatra 6 tonga fotoana.
Ireo mpanamboatra tranga
Hijery manangona tavoahangy tsy misy ao anaty baoritra. Afaka misafidy ny boaty dia azo ampidirina na mipetaka.
Mba hanaterana tavoahangy amin'ny fomba voafehy ao anaty boaty na silos mora ampiasaina.